UMzantsi Afrika unoMphathiswa wezoKhenketho omtsha: Ngubani uLindiwe Sisulu?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo » UMzantsi Afrika unoMphathiswa wezoKhenketho omtsha: Ngubani uLindiwe Sisulu?
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Hon. Liniwe Nonceba, Umphathiswa Wezokhenketho eMzantsi Afrika
NgoLwesithathu, Agasti 4 u-Hon. U-Lindiwe Nonceba Sisulu wayengu-Mphathiswa Wezokuhlaliswa Kwabantu, Amanzi noGutyulo loMzantsi Afrika. Ngolo suku wamkela uphando lwe-SIU kwisebe lakhe lokuncothula neengcambu ubuqhetseba norhwaphilizo. Emva komhla wangoLwesine, nge-5 ka-Agasti lo mphathiswa wonyulwa njengo-Mphathiswa Wezokhenketho wase Mzantsi Afrika.
Izenzo zorhwaphilizo kuwo onke amasebe karhulumente namashishini aphantsi korhulumente ayikhe yahluka okanye yahlukaniswa naManzi noGutyulo.
IBhodi yoKhenketho yase-Afrika ikulungele ukulwa kunye neqela labaphumeleleyo ukwakha kwakhona ukhenketho e-Afrika
U-Lindiwe Nonceba Sisulu wazalwa nge-10 ka-Meyi ka-1954 kwaye wayelilungu lezopolitiko eMzantsi Afrika, elilungu lepalamente ukusukela ngo-1994.
Umhlonishwa. U-Lindiwe Nonceba Sisulu wonyulwa njengo-Mphathiswa Wezokhenketho nguMongameli woMzantsi Afrika u-Cyril Ramaphosa phakathi kwentlekele ye-COVID-19.
Cuthbert Ncube, Usihlalo we IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika uvuyisana noSisulu kwaye wanika nenkxaso yakhe ukunceda umphathiswa omtsha ekubumbeni ngokutsha amabali eAfrika ngokhenketho.
Ukufika kwabakhenkethi eMzantsi Afrika bafikelele kwirekhodi ngoJanuwari 2018 nge-1,598,893 ngoJanuwari kunye nerekhodi eliphantsi lama-29,341 ngo-Epreli ka-2020 ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
UMzantsi Afrika yindawo yabakhenkethi kwaye ishishini lenza isixa esikhulu semali yengeniso yelizwe.
UMzantsi Afrika ubonelela abakhenkethi basekhaya nabamazwe aphesheya ngeendlela ezahlukeneyo, phakathi kwezinye iindawo ezintle zendalo kunye neendawo zokugcina izilwanyana, amafa enkcubeko ahlukeneyo, kunye newayini ehlonitshwayo. Ezinye zeendawo ezithandwa kakhulu zibandakanya iipaki ezininzi zesizwe, ezinje ngeKruger National Park ebanzi emantla elizwe, amanxweme kunye neelwandle zephondo laKwaZulu-Natala kunye neNtshona Koloni, kunye nezixeko ezikhulu ezinjengeKapa, ​​iGoli, kunye Thekwini.
Umphathiswa omtsha uza namava amashumi eminyaka kodwa izandla zakhe ziya kugcwele ekwakhiweni kwamazwe akhe kwezokuhamba nakwezokhenketho. Okwangoku, i-COVID-19 ikwelinye incopho kwaye amazinga okugonya asezantsi, okwenza ukhenketho lwamazwe aphesheya kweli lizwe lisondele ekubeni lingenakwenzeka.
Cuthbert Ncube, emele ishishini lezoKhenketho e-Afrika njengoSihlalo wase-Eswatini IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika ikhuphe ingxelo.
Cuthbert Ncube, uSihlalo weBhodi yezoKhenketho ye-Afrika
Iqela lethu liqela lakho! Lo ngumyalezo wethemba kunye nenkxaso ngabaphathi beBhodi yoKhenketho yaseAfrika.
Sizimisele ukuxhasa umphathiswa omtsha wase Mzantsi Afrika. Oku akuyi kunceda uMzantsi Afrika kuphela, kodwa yonke imimandla yeAfrika kunye namazwe apho ishishini lokhenketho linegalelo elikhulu kwi-GDP.
UCuthbert uthe: Kuluzuko olukhulu nemincili njengoko sisamkela kwaye sivuyisana noMhlonishwa uLindiwe Nonceba Sisulu njengoMphathiswa Wezokhenketho eMzantsi Afrika. Amava akhe abanzi kunye namaxesha athile ngokuqinisekileyo aya kuqhuba amaphulo okubuyisela kwimeko yesiqhelo hayi eMzantsi Afrika kuphela kodwa nakwilizwekazi ngokubanzi. UMzantsi Afrika umi njengeZiko lokudibanisa iAfrika.
KwiBhodi yoKhenketho yase-Afrika, sijonge ekusebenzisaneni nasekusebenzeni ngokusondeleyo ISebe lezoKhenketho eMzantsi Afrika ngokuququzelela uRhwebo noTyalo-mali kuKhenketho lwase-Afrika, ukuguqula ngokutsha uKhenketho lwase-Afrika, ukubumba ngokutsha ibali le-Afrika kunye nokuKhuthaza ukhenketho lwezendalo, njengoko sisomeleza ukukhula okuzinzileyo, ixabiso kunye nomgangatho wokuhamba nokhenketho ukusuka nokubuya e-Afrika.
Ezokhenketho lelinye lawona macandelo ezoqoqosho athembisayo e-Afrika. Inamandla okungaqhubeli nje ukukhula koqoqosho kwilizwekazi kuphela kodwa ekuvuseleleni uphuhliso olubandakanya wonke ubani ngaloo ndlela ifuna intsebenziswano esondeleyo phakathi kwamazwe angamaLungu kunye nawo onke amagcisa ecandelo ukukhuthaza ukomelela kwecandelo lezokhenketho kunye nezoKhenketho.
IBhodi yoKhenketho yase-Afrika kunye nabameli bayo kwilizwekazi lase-Afrika sisebenza namacandelo abucala nawoluntu ekwakheni ngokutsha ishishini lokuhamba nokhenketho eAfrika.
Nguba ni u Ohloniphekileyo uLindiwe Nonceba Sisulu
UMongameli woMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa uqeshe uMphathiswa uLindiwe Sisulu njengoMphathiswa wezoKhenketho ngomhla we-5 kweyeThupha wowama-2021 kuhlenga-hlengiso olwalungenanjongo ikhethekileyo, ngaphandle kokususa urhulumente weqela likaZuma kwiKhabhinethi.
Umphathiswa omtsha wezokhenketho uxhaswa nguSekela Mphathiswa Wezokhenketho, uFish Mahlalela. Umsebenzi weSebe lezoKhenketho kukudala iimeko ezikhuthaza ukukhula okuzinzileyo nophuhliso lwezokhenketho eMzantsi Afrika.
UMphathiswa wezoKhenketho eMzantsi Afrika, oHloniphekileyo. Lindiwe Sisulu
USisulu wazalelwa kwiinkokheli eziguqukayo Walter kwaye UAlbertina Sisulu in Rhawutini. Ungudade wentatheli UZwelakhe Sisulu kunye nezopolitiko UMax Sisulu.
UNks. Sisulu wonyulwa njengoMphathiswa wezoKhenketho ngomhla we-5 kweyeThupha wama-2021. WayenguMphathiswa Wezokuhlaliswa Kwabantu, Amanzi, Nogutyulo Ukusukela ngomhla wama-30 kuCanzibe wama-2019 ukuya kowe-5 Agasti 2021. WayenguMphathiswa Wezobudlelwane Namazwe Ngamazwe Nentsebenziswano ukususela ngomhla wama-27 kweyoMdumba 2018 ukuya kumhla wama-25 kuCanzibe wama-2019. UNks. Lindiwe Nonceba Sisulu wayenguMphathiswa Wezokuhlaliswa Kwabantu kwiRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika ukusukela ngomhla wama-26 kuCanzibe wama-2014 de kwangowama-26 kweyoMdumba yowama-2018.
Ube lilungu lePalamente ukusukela ngo-1994. EbenguSihlalo weNdibano ye-Ofisi yaBaphathiswa base-Afrika ngezeZindlu noPhuhliso lweeDolophu ukusukela ngo-2005. UNks. Sisulu ulilungu leKomiti yesiGqeba yeSizwe ye-African National Congress (ANC) kunye ilungu leKomiti yeSizwe yokuSebenza ye-ANC. Wayengumphathiswa weTrasti yeDemokhrasi yeMfundo yaseMzantsi Afrika; Umphathiswa we-Albertina kunye neWalter Sisulu Trust; kunye nelungu leBhodi yeNelson Mandela Foundation.
UNks. Sisulu wasigqiba isiQinisekiso Jikelele seMfundo (GCE) kwiNqanaba eliQhelekileyo leYunivesithi yaseCambridge kwiSikolo iSt Michael eSwazini ngo-1971, kunye ne-GCE Cambridge University Advanced Level ngo-1973, nakhona eSwazini.
Uphethe isidanga se-Master of Arts kwiMbali kwiZiko leZifundo zase-Afrika eseMazantsi kwiYunivesithi yase-York kunye no-M Phil naye ovela kwiZiko le-Southern African Studies kwiYunivesithi yase-York ofumene u-1989 ngesihloko esithi: “Abafazi eMsebenzini nase Umzabalazo wenkululeko eMzantsi Afrika. ”
UNkosazana Sisulu ukwangothweswe isidanga se-BA, isidanga se-BA Honours kwiMbali, kunye neDiploma yezeMfundo kwiDyunivesithi yaseSwaziland.
Umsebenzi / Izikhundla / Ubulungu / eminye imisebenzi
Phakathi kowe-1975 nowe-1976, uNkosazana Sisulu wayevalelwe ngenxa yezopolitiko. Emva koko wazimanya no-Umkhonto weSizwe (MK) wasebenzela imibutho ye-ANC engaphantsi komhlaba ngelixa wayesekuthinjweni ukusukela ngo-1977 ukuya ku-1978. Ngomnyaka ka 1979, wafumana uqeqesho kwezomkhosi.
Ngo-1981, uNkosazana Sisulu wafundisa kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo iManzini eSwaziland, waze ngo-1982 wafundisa kwiSebe lezeMbali kwiYunivesithi yaseSwaziland. Ukusukela ngo-1985 ukuya ku-1987, wafundisa kwiKholeji yoQeqesho yoTitshala eManzini kwaye wayengumvavanyi oyintloko wezeMbali kwiiMviwo zeSatifikethi seJunior eBotswana, eLesotho naseSwaziland. Ngo-1983, wasebenza njengomhleli-weqonga weThe Times yaseSwaziland eMbabane.
UNks Sisulu wabuyela eMzantsi Afrika ngo-1990 kwaye wasebenza njengomncedisi kuJacob Zuma njengentloko yeSebe lezoBuntlola le-ANC. Usebenze njengoMlawuli oyiNtloko we-ANC kwiNgqungquthela yeDemokhrasi yoMzantsi Afrika ngo-1991 nanjengomlawuli wezoBuntlola kwiSebe lezoBuntlola nezoKhuseleko le-ANC ngo-1992.
Ngo-1992, uNkosazana Sisulu waba ngumcebisi kwiKomiti yamaLungelo eSizwe yaBantwana yeZizwe eziManyeneyo yezeMfundo, iSayensi kunye neNkcubeko. Ngo-1993, wasebenza njengomlawuli weGovan Mbeki Research Fellowship kwiYunivesithi yaseFort Hare, kwaye ukusukela ngo-2000 ukuya ku-2002, wayesebenza njengentloko yeZiko loLawulo loKwakhiwa ngokutsha kweNgxakeko.
UNks Sisulu wayelilungu leKomiti yoLawulo, uMbutho wamaPolisa kunye nekhosi yoLawulo kwiYunivesithi yaseWitwatersrand ngo-1993; ilungu labaphathi beBhunga elisezantsi lezoBuntlola, iBhunga leSigqeba seThutyana ngo-1994, kunye nosihlalo weKomiti eSisigxina yePalamente yezobuNtlola ukususela ngo-1995 ukuya ku-1996.
Phambi kokuqeshwa njengo-Mphathiswa weNkonzo kaRhulumente noLawulo, UNks Sisulu usebenze njengo-Sekela Mphathiswa Wezasekhaya ukusukela ngo-1996 ukuya ku-2001. UMphathiswa wezeZindlu ukususela ngo-Epreli 2001 ukuya kuMeyi 2004; noMphathiswa wezoKhuselo naMagqala oMkhosi ukusukela ngoMeyi ka-2004 ukuya kuJuni wama-2009.
WayenguMphathiswa weNkonzo kaRhulumente noLawulo lweRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika ukusukela ngeyeSilimela ngowama-2012 ukuya kowama-25 kuCanzibe wama-2014.
Uphando / iiNtetho / amaBhaso / imihombiso / Iibhasari noPapasho
UNks Sisulu upapashe le misebenzi ilandelayo:
AbaseTyhini baseMzantsi Afrika kwiCandelo lezoLimo (incwadana). IYunivesithi yaseYork ngo-1990
Abasetyhini emsebenzini kunye noMzabalazo wenkululeko ngo-1980
Imixholo kwiNkulungwane yamashumi amabini yoMzantsi Afrika, iOxford University Press. Ngo-1991
Iimeko zokuSebenza kwabasetyhini eMzantsi Afrika, uHlaziyo lweMeko yoMzantsi Afrika. IKomiti yeSizwe yamaLungelo abaNtwana. I-UNESCO. Ngo-1992
Ukuhanjiswa kweZindlu kunye noMqulu weNkululeko: iBhakana yeThemba, i-Ajenda eNtsha kunye neKota yesiBini. Ngo-2005.
UNks Sisulu wawongwa iZiko lamaLungelo oLuntu loBambiswano eGeneva ngo-1992. Iprojekthi yakhe yeZiko leZizwe eziManyeneyo yabangela ukuba iYunivesithi yaseWitwatersrand School of Business iseke ikhosi yoqeqesho yokuphucula izakhono zobupolisa zamalungu eMK.
Ufumene iMbasa kaMongameli ngeNdawo yoQeqesho oluNtsha lokuHanjiswa kweZindlu liZiko lezeZindlu loMzantsi Afrika ngo-2004; Ngo-2005, wafumana imbasa kuMbutho waMazwe ngaMazwe wezeNzululwazi ngezeZindlu ngokuthathela ingqalelo amagalelo akhe kunye nempumelelo yakhe ekuphuculeni nasekusombululeni iingxaki zomhlaba.
Nguba ni u UMnu Fish Mahlalela, uSekela Mphathiswa weSebe lezoKhenketho kwiRiphabliki yoMzantsi Afrika?
UMnu Fish Mahlalela ebenguSekela-Mphathiswa weSebe lezoKhenketho leRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika ukusukela ngomhla wama-29 kuCanzibe wama-2019. Ulilungu le-African National Congress kwiNdlu yoWiso-mThetho yoMzantsi Afrika
USekela-Mphathiswa Wezokhenketho uFish Mahlalela
Ufumene isatifikethi sakhe sematriki kwiNkomazi High School kwaye unesidanga seHonours kuLawulo nakwezobuNkokheli kwiYunivesithi yaseWitwatersrand.
Emva konyulo jikelele luka-1994, wabekwa njengelungu lepalamente kwaye sele elikhonza ilizwe ngoxanduva olwahlukeneyo kwiphondo nakwizindlu zowiso-mthetho zesizwe.
Ube lilungu lendlu yowiso-mthetho yephondo, nalapho ebesebenza njengosihlalo weKomiti eSisigxina yeAkhawunti yoLuntu (SCOPA) kwaye engusihlalo woMbutho weKomiti yeeAkhawunti zikaRhulumente yoMzantsi Afrika, kwaye ebekwangusihlalo we-Southern IKomiti yoPhuhliso ye-Afrika kwii-Akhawunti zikaRhulumente.
Ngexesha lokusebenza kwakhe kwiphondo laseMpumalanga, usebenze kwizikhundla zolawulo ezahluka-hlukeneyo, ingakumbi uxanduva olulandelayo, uMphathiswa weSebe leMicimbi yezeNdalo nezokhenketho, uMphathiswa weSebe lezeNkcubeko, ezeMidlalo noLonwabo, uMphathiswa weSebe loRhulumente woMmandla nezeZendlela, uMphathiswa wePhondo. eyeSebe lezeNdlela nezoThutho, uMphathiswa wePhondo weSebe lezoKhuseleko noKhuseleko, noMphathiswa weSebe lezeMpilo noPhuhliso lwezeNtlalo.
Wayekhe wakhonza njengoMbhexeshi we-ANC kwiKomiti yeMicimbi yeSebe lezeMpilo kwiNdlu yoWiso-mthetho
UMnumzana Mahlalela unembali yeqhayiya kumzabalazo wokulwa ucalucalulo eMzantsi Afrika, wagxothwa ngeminyaka yoo-1980 kwaye wafumana uqeqesho kwezomkhosi kumazwe amaninzi njengelungu lephiko lomkhosi we-ANC, uMkhonto We Sizwe Ngo-2002 wonyulwa njengoSihlalo we-ANC kwiPhondo laseMpumalanga ngo-2002.